मोटोपनका किसिम : कुन बढी खतरनाक ? – Akhabar Today
काठमाडौं, १५ फागनु । जुनसुकै कारण होस्, मोटोपनलाई त्यति राम्रो मानिँदैन । यसले शरीर भद्दा देखाउनेमात्र नभई अनेक रोगको जोखिम बढाइदिन्छ । यद्यपि, मोटोपन के कारण बढेको हो ? वा कस्तो किसिमको मोटोपन हो ? त्यसबारे पनि जान्न जरुरी छ ।